Markhaati: burburka saaxiibtinimada sunta leh - teles relay
Xitaa haddii aan iska iloobinno, saaxiibtinimadu waxay waxyeello u geysan kartaa sida jaceylka iyo wixii intaas ka sii badan marka ay tahay dadka kuugu dhow ee ka ciyaara dareenkaaga…
Saaxiibtinimadu waa cunsur muhiim u ah nolosha qaasatan haddii, aniga oo kale, aadan aad ugu dhowaan qoyskaaga. Shakhsi ahaan, marwalba waxaan jeclaan jiray inaan naftayda si buuxda ugu maalgaliyo cilaaqaadkeyga oo dhan. Waxaan haystaa fikrad aad u qoto dheer oo saaxiibtinimo ku saleysan ixtiraam, is-gaarsiin, joogitaan iyo taageero. Waxaan hayaa (inbadan) khaladaad laakiin waxaan isku dayaa inaan noqdo saaxiibka aan ku xisaabtami karno, kaasoo dhagaysan doona isagoon wax xukumin, oo dhiiri gelin doona, riixaya oo bixin kara talo aan xadidneyn. Haddii aan jeclahay, waxaan wada siiyaa waxaan oo dhan waxaanna uga bixi karaa jidkeyga si aan kan kale uga dhigo mid faraxsan oo aan dareemayo niyad jab haddii wax isaga ku dhacaan. Waana sababta oo ah waxa aan qalbigayga ku qaataa in ay iga go'een saaxiibbadaa qaar.
Si kastaba ha noqotee, naxariistu badanaa waxay igu ciyaaraysay xeelado. Marka ugu horeysa, markaad deeq badantahay, waxaad albaabka u furi doontaa dadka aan laga maarmaan aheyn oo iyagu naxariis daradaas u adeegsada. Waxay ku qaldamaan u hibeyntaada daciifnimada. Sababtoo ah in wax la siiyo qof walba waa in lasiiyaa qof walba. Xitaa way ka sii daraysaa markaad xishoodaan xitaa haddii ay jiraan xalal looga gudbi karo tan. Guud ahaanna, dadkaani waxay i istacmaalaan markay ugu liidato ka dibna isu oggolaadaan inay tallaabo iga qaadaan. Hadda ka dib ma tiriyo tirada jeer ee ay tani dhacday.
Culayska fekerka marwalba way adag tahay in la maareeyo laakiin ma ogtahay ...
Sida looga takhaluso urka siilka dabiici ahaan…
Aniguba mas'uul baan ahay, dabcan. Waxaan u muuqdaa inaan doonayo inaan badbaadiyo kuwa dhibaataysan, xitaa haddii ay la micno tahay iloobi. Laakiin waxaan ku sameeyaa jacayl iyo feker la'aan maxaa yeelay waa qeyb ka mid ah shaqsiyaddayda. Waxaan la kulmay xanuunka sidoo kale xanuunka iyo haddii aan ka caawiyo qof inuu dareemo wanaag, waxaan ku sameeyaa si kadis ah. Waxaan isku dayayaa inaan noqdo saaxiibka aan doonayo.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ujeeddooyinkeyga wanaagsan oo dhami, dabeecadda bani aadamka aysan ahayn mid jilicsan Sababta oo ah sida ugu dhakhsaha badan ee aad adigu u tahay nooca naftaada iska qaad si aad uga fogaato doodaha oo aad had iyo jeer u joogtid kuwa kale inkasta oo ay jiraan wax kasta (haddii ay u qalmaan iyo in kale), waannu ku garaacaynaa oo waan kuu hawlgelinaynaa. Nasiib wanaagse, qof walbana isku mid ma ahan ee waxaa jiro dad ku ixtiraami doona oo kaaga mahadcelin doona qiimahaaga dhabta ah. Laakiin waa muhiim inaad naftaada cadeyso.
Waxaan qalad sameeyay aniga oo aan sifiican wax u qabanin oo aan nafteyda ka helo xaalado igu kallifaya dhibaato aad u daran. Had iyo jeer, khaladka ugu yar ee aan sameeyay waxay ahayd in xukun la igu xukumo, waxaa la igu ciqaabay markii la iga saaray. Markii aan dhiibtay figradayda daacadda ah, waa la ii diiday maxaa yeelay ma jecli. Haa, haddii aad dhiirrigelin badan tahay, waad cadhoon kartaa marka taa liddi ku tahay waxaad yar tahay maxaa yeelay adigu si fudud uma raacsani. Wax walbaa waa marmarsiinyo inaad iska dhigto inaad tahay dambiile.
Dadkani sunta ahi had iyo jeer waxay iga filayaan wax badan aniga aniga oo aan isku dayaynin in ay halkaas joogo markii aan runtii u baahanahay iyaga oo isku dayaya in ay "koraan" markii qaar ka mid ah aragtidayda aysan ka farxin, si ay u raaxaystaan, ula hadlaan midba midka kale, Aniga oo ka yaaban waxa dhibaatadaydu ahayd markii aan ku qanacsanahay la noolaashaha iyaga iyo xukunkooda. Tan macnaheedu maahan in wax walba la aqbalo laakiin qofna qumman yahay oo waxaan jecel nahay kuwa aan jecel nahay inkasta oo ay cilado leeyihiin. Sida iska cad, waxaas oo dhami waxay cawaaqib xumo ku lahaayeen sida aan maanta ahay. Waxaan qabaa kalsooni aad u yar oo aan had iyo jeer raali gelin ka bixiyo sidii aan ahay. Waxaan sidoo kale dhib badan kala kulmaa iska hor imaadka waxaanan doorbidayaa inaan baaba'o. Laakiin anigu waan xoog badanahay, waxaanan awoodaa inaan ka madax banaanaado dadka i dhibaateeya intii aan cafin lahaa waqtiga oo dhan. Markaa adiguna waad ka shaqeyn kartaa isku kalsoonidaada.
Waxa aan kugula talin karaa waa in aad si taxaddar leh u doorato kuwa kugu xeeran. Haddii qof adeegsado iskuxirkaaga si uu kaaga dhigo mid ka hooseeya dhulka ama haddii uusan ku aqbalin 100% qaladaadkaaga iyo tayadaada, isagu uma qalmo. Waad muhiim tahay, wax badan ayaad soo bandhigeysaa, boos ayaad leedahay waana inaad naftaada ka fikirtaa. Nasashadu way adkaan doontaa, laakiin way ku anfici doontaa mustaqbalka fog. Saaxiibbada saxda ahi marwalba way joogi doonaan waxkastoo aad samaynaysid waxaanan rajaynayaa inaad kula kulanto jidkaaga.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore on: https://trendy.letudiant.fr/temoignage-comment-j-ai-ete-brisee-par-des-amities-toxiques-a4857.html
Dhismaha: coronavirus wuxuu gooyaa kala bar nus bilyan FCFA miisaaniyaddii Howlgalka si loo dhiirrigeliyo agabyada maxalliga ah
Walwalku marwalba way adagtahay in la maareeyo laakiin ma ogtahay in bisadu ...